I-NASA: I-2016 izoba efudumele emlandweni | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-NASA: U-2016 uzoba onemfudumalo emlandweni
U-2016 uqale ukwephula amarekhodi okushisa, futhi mhlawumbe kuzophela okufanayo. Manje, yiNASA uqobo lwayo ethi lo nyaka uzoba onemfudumalo emlandweni oqoshiwe, ngokwanda okukhulu kwamazinga okushisa ebusweni bomhlaba. NgoFebhuwari sifunde ukuthi amazinga okushisa aphakathi komhlaba anyuke ngama-1,35 degrees, Izobe inyuke ngamalini phakathi kwamanje nokuphela konyaka?
Iqiniso ukuthi akwaziwa. Mhlawumbe sizokweqa ama-degree ama-2 ngokushesha kunokuba besicabanga.
Abanye ochwepheshe bathi ukunyuka okukhulu kwezinga lokushisa ngenyanga yesibili yonyaka kubangelwe yisimo sezulu se-El Niño; nokho, ososayensi bayaqhubeka nokuxwayisa lokho isimo sezulu somhlaba jikelele sithinteka kakhulu ngokukhishwa komuntu amagesi abamba ukushisa, ikakhulukazi ngenxa yokwanda kokugxila kwe-carbon dioxide.
UGavin Schmidt, umqondisi weGoddard Institute for Space Studies eNew York, ubhale ku-akhawunti yakhe yeTwitter ukuthi, yize engavamisile ukuphawula ngezinyanga ezithile, ngoba kunesikhathi "esiningi kakhulu" futhi "nesimo sezulu asanele", lapho ebona Izinhlobo zesimo sezulu sikaFebhuwari zazingasho igama elilodwa kuphelaHewu', Ngaleyo ndlela ekhombisa ukuthi wamangala kanjani.
Njengoba amazinga okushisa omhlaba ekhuphuka ngaphezu kwezilinganiso zawo zonyaka, okuthile okwenzeka ikakhulukazi eNyakatho Nenkabazwe, Iqhwa lasolwandle i-Arctic liyancibilika ngokushesha okukhulu futhi ngokushesha okukhulu. Iqhwa eligcina olwandle izinga lalo eliya ngokuya liphakama. Kodwa hhayi lokho kuphela, kepha abasePoland baqopha amarekhodi abo ngenyanga. Eqinisweni, ekupheleni kukaSepthemba 2015, ukuncibilika kwe-Arctic kwaphawula irekhodi elisha lezinga eliphansi, njengoba sikutshele Lesi sihloko.
Ukuguquka kwesimo sezulu kuyiqiniso. Kuyinkinga ngokushesha noma kamuva kuzosithinta sonkekungakhathalekile ukuthi sikuphi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » I-NASA: U-2016 uzoba onemfudumalo emlandweni
Mthokozisi (@mthokozisi) kusho
Kubonakala kucace ukuthi sisondela enhlekeleleni kuze kube yilapho sekwephuze kakhulu ukuyigwema. Ukulinganiselwa kwalokho okungenzeka:
Phendula ku-Imglaich (@Imglaich)
Ososayensi sebekhulume lokhu iminyaka engama-30. Kepha osopolitiki banesifiso sokwenza imali kunempilo yomhlaba. Kuze kube yilapho bebona ukuthi sonke sihamba ngesikebhe esisodwa futhi azikho izikebhe zanoma ngubani; ngisho nabacebe kakhulu.
Njengenjwayelo, ubuhlakani bakhe obubi nokufisa kwakhe amandla ngokweqile kuzoholela ekubeni sonke sonakaliswe.
U-Alejandro De Fr kusho
Iqiniso ukuthi sekuyiminyaka engaphezu kwamashumi amathathu kungenzeka sike sayizwa le ndaba ukuthi into yokufudumala nokunye kodwa ingekho neze into emangalisayo eyenzekile ngoba siqhubeka nengoma efanayo nenkinga efanayo nabantu abasithandayo nabantu abathola uhlangothi ngalunye banemibono yabo abachaza ukuthi baqinisile, kahle-ke lapha kuzokwenzeka into efanayo njengoba endabeni yomalusi 'impisi iza' futhi akaze eze kwaze kwaba ngolunye usuku efika wadla izimvu nomalusi, uma sicabanga ngempela ukuthi singaqhubeka singcolisa iplanethi lapho sihlala khona ngaphandle kokuba nanoma yiluphi uhlobo lwempumela noma ngubani ocabanga kanjena akufanele abe nokukhanya okuningi ngaphakathi kwengqondo yakhe
Le ndaba ingalingana nomuntu obhemayo, ugwayi noma iphakethe ngeke likubulale kepha ngoba azikubulali akusho ukuthi ayinayo imiphumela emzimbeni wakho, okuwukuphela kwento okusho ukuthi kungekudala noma ngokuhamba kwesikhathi Uthanda noma ungathandi, uzobona umthelela ongemuhle empilweni yakho noma ngabe abantu bathini noma bangasho ukuthini, impilo yakho iyoba yimbi, i-obsi noma uma lokho okusiholela emthethweni ka-Isaac Newton kuzo zonke izenzo kunempendulo ehluke ngokuphelele futhi elinganayo
Masikhohliswe ukuthi sibhubhisa iplanethi ngokuncane kepha ngokungenakuphikiswa futhi uma singenzi okuthile futhi sisheshe ngokushesha sizobona izinto ezingakaze zibonwe ngaphambili.
Madoda ukunakwa, ningakhohliswa noma nikhohliswe lapho kungcola izinto ezimbi kakhulu ezizotholwa kanti iqiniso ukuthi izinto ngeke zibe ngcono uma zingabi zimbi kakhulu
Phendula u-Alejandro De Fr
Ngiyavuma ngokuphelele. Ngaso sonke isikhathi lapho sanda futhi ngenxa yalokho, isikhathi ngasinye lapho singcolisa okuningi, nokuthi sifuna noma cha kuthonya isimo sezulu.
Asethembe ukuthi kuzothathwa izinyathelo ezisebenza ngempela ukugwema inhlekelele.
Izindunduma ezihamba phambili zomhlaba
Yini ukuqhuma kwesiphepho futhi kungani kufanele sikhathazeke?